Yini imvelo engcono kakhulu ye-IT yebhizinisi lami? | Martech Zone
Yini imvelo engcono kakhulu ye-IT yebhizinisi lami?
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekuvikeleni ibhizinisi lethu eminyakeni yedijithali ukuba nesisombululo se-IT esisunguliwe, esiphethwe. Kepha, iyiphi inketho engcono yebhizinisi lakho? Ngokwethembeka, kuya ngosayizi webhizinisi lakho, uma ufuna ukuqasha iqembu langaphakathi le-IT, nokuthi ufuna ukulawula okungakanani phezu kwedatha yakho. Kumabhizinisi amaningi, le yimibuzo enzima ukuyiphendula.
Our iklayenti le-colocation wholesale, I-Lifeline Data Centres, ibilokhu ikhuluma ngobuhle bezisombululo ezahlukahlukene ze-IT, esizisizile zaphenduka i-infographic. Ihlola ukuthi yini, kuphi, ubani, nokuthi malini ngezixazululo ezahlukahlukene ze-IT, kufaka phakathi: i-computing yamafu, izixazululo ezilawulwayo, ukuqoqwa kolwazi kanye nesikhungo sedatha esisendlini.
Akunandaba ukuthi yisiphi isisombululo osikhethayo, nazi izindlela ezithile ongazithatha ukuze ugcine engqondweni:
Vumela izinhlelo zakho zokusebenza ezibucayi zikuqondise.
Isikhathi esiphezulu nokuthembeka kunzima ukukufeza ekamelweni elingemuva.
Ukuqashwa kwabasebenzi be-IT kuqhathaniswa nokukhishwa kwempahla kuyinkinga yejubane, imali nekhwalithi.
Njalo yenza izibalo. Izinto ezilula zibiza imali bese kubalwa imali ekhokhwa njalo ngenyanga.
Ngabe ibhizinisi lakho liyivikela kanjani idatha yakho njengamanje?
Umhlinzeki Wentengo Ye-imeyili Wensizakalo ye-SaaS